पाठेघरको मुखको क्यान्सर र यसबाट बच्ने उपाय | चितवन पोष्ट
पाठेघरको मुखको क्यान्सर र यसबाट बच्ने उपाय
नेपालमा महिलामा हुने क्यान्सरमध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर (सर्भाइकल क्यान्सर) सबैभन्दा बढी देखिने रोग हो । यसमा समयमै सजगता अपनाउने हो भने यो क्यान्सरबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपीभी)को संक्रमणले हुने यो क्यान्सरबारे अझै पनि धेरै महिलाहरु अनभिज्ञ छन् । नेपालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरले पीडित महिलाहरुको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यो निकै डरलाग्दो कुरा हो । पाठेघरको मुखको क्यान्सर पुरूषको कारणले नै हुन्छ । महिलाको पाठेघरको क्यान्सर ३० देखि ६० वर्ष उमेरकालाई बढी हुने गर्दछ ।
क्यान्सर हुनुपूर्व नै पत्ता लगाउन सकिने भए पनि जनचेतनाको कमीका कारण पाठेघरको मुखको क्यान्सरपीडित महिलाको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सृष्टि प्रजापति भन्छिन्, “यो भाइरसले पाठेघरको मुखलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्छ, समयमै संक्रमण पत्ता लगाउन नसके आठ–दस वर्षपछि यो क्यान्सरमा परिणत हुन्छ । संक्रमण भए÷नभएको गर्भश्राव परीक्षण (प्याप–स्मेयर टेष्ट) गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ ।”
यो परीक्षणबाट पाठेघरका विशिका सामान्य अवस्थामा रहे÷नरहेको पत्ता लगाउने सरल र छरितो विधि पनि हो । यो परीक्षण सस्तो पनि छ र यो जाँच गर्दा महिलालाई दुख्दैन । यो परीक्षण पाँच मिनटदेखि १५ मिनटसम्ममा गर्न सकिन्छ ।
प्याप–स्मेयर परीक्षण गर्दा दुई दिनअगाडिदेखि नै यौन सम्पर्क गर्नुहुँदैन, साथै यो परीक्षण महिनावारी भएको समयमा पनि गर्न मिल्दैन । यो परीक्षणका लागि सकभर एक हप्ताअघि एन्टिबायोटिक औषधि पनि खानुहुँदैन ।
डा. प्रजापति यो परीक्षण २३ वर्षभन्दामाथिका वा विवाह भएको तीन वर्ष पूरा भएका महिलाले गर्नुपर्ने सल्लाह दिन्छिन् । यो परीक्षणले भविष्यमा हुने ठूलो धनजनको क्षति हुनबाट बचाउँछ । यो परीक्षण पहिला छ महिनाको फरकमा तीनपटक गर्नुपर्छ । यो तीनैपटक परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएमा तीन वर्षसम्म परीक्षण गराउनुपर्छ । यसको प्रक्रिया लामो भएकाले धेरैजसोले बीचमा नै परीक्षण गर्न नै छाड्ने गरेको पाइन्छ । तर, छाड्न हुँदैन । क्यान्सर जतिबेला पनि हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने हुन्छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरूद्ध खोपको पनि आविष्कार भइसकेको छ । नौ वर्षदेखि १३ वर्षका बालिकालाई लगाइन्छ, तर नेपालमा यो खोप महँगो भएकाले यो प्रयोगमा आउन सकेको छैन । तर पनि कास्की र चितवन जिल्लाबाट यो खोप लगाउने कार्य सुरू गरिएको छ ।
चिकित्सकले यदि पाठेघरको मुखमा एचपीभी भाइरस प्रवेश गरेको छ भने यौन सम्पर्क सुरू भएपछि यसले असर देखाउन आरम्भ गर्ने र योनिबाट सेतो पानी बग्ने तथा चिलाउनेजस्ता प्रारम्भिक लक्षण देखा पर्ने बताउँछन् ।
चिकित्सकका भनाइअनुसार यस्ता लक्षण देखिनासाथ प्याप–स्मेयर टेष्ट गराउनुपर्ने हुन्छ । यो परीक्षणले क्यान्सर संक्रमण हुनुअगाडि कुन अवस्थामा छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने बढी सम्भावित कारणहरु निम्नानुसार रहेका छन् :
१) महिलाले धेरै जनासँग असुरक्षित यौन सम्बन्ध राखेमा ।
२) पुरूषले धेरै जनासँग असुरक्षित यौन सम्बन्ध राखेमा ।
३) सानै उमेरमा विवाह भएमा ।
४) सानै उमेरमा यौन सम्पर्क राखेमा
५) सानै उमेरमा बच्चा जन्माएमा ।
६) धेरैपटक गर्भाधारण गरेमा ।
७) धूमपान गरेमा (धूमपान गर्दा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको खतरा बढ्ने हुन्छ) ।
८) लामो समयसम्म हर्मोनयुक्त परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेमा पनि यसको सम्भावना बढी हुन्छ । (हर्मोनयुक्त परिवार
नियोजनका साधन ३÷४ वर्षको बीचमा केही समय रोकेर पुनः प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।)
हर्मोनले रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गर्ने भएकाले बीच–बीचमा साधन परिवर्तन गर्नुपर्छ । यदि यौन सम्पर्क गर्दा रगत देखिएमा, महिनावारी नभए पनि रगत देखिएमा, योनिबाट सेतो गनाउने पानी आउने, सानो पेट दुखिरहने, ढाड दुख्ने, थकाइ बढी लाग्ने, लामो समयसम्म खोकी निको नहुने, स्वर परिवर्तन हुने, दिसा वा पिसाबको तालिका फरक हुने, तौल घट्दै जानेजस्ता लक्षण देखिएपछि पाठेघरको मुखको क्यान्सर भएको हुन सक्ने सम्भावना बढी भएकाले यीमध्ये कुनै पनि लक्षण देखिएमा तुरून्त चिकित्सकको सल्लाह लिनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
पुरूषले धेरै जनासँग यौन सम्पर्क राख्दा वा धूमपान गर्दा पनि महिलालाई सर्न सक्छ । असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्नबाट आपूmलाई जोगाऔँ । महिलाहरुले सुरक्षित र खानपिन व्यवस्थित, नियमित व्यायाम र पटकपटक यस्ता लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग सल्लाह लिने र आफ्नो पाठेघरको मुख परीक्षण गर्ने हो भने यस्ता रोगबाट बच्न सकिन्छ ।